Nyochaa nke Sony eReader ọhụrụ: Sony PRS-T3 | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Joaquin Garcia | | ndị na-agụ akwụkwọ, Hardware, Sony
Izu ole na ole gara aga, guysmụ okorobịa nọ na Sony ji obiọma nye anyị eReader ọhụrụ ha, Sony PRS-T3, ka anyị wee nwee ike nyochaa na eReader. Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị bipụtara ya unboxing nke eReader na taa anyị na-ewetara gị nyocha. Amaara m na eReader a enweghị ezigbo aha ugbu a hapụ Sony ya ebookstore na ihu ọma nke Kobo ebookstoreỌ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ otu oge kachasị mma ịtụle eReader a, ebe ọ bụ na ọbá akwụkwọ Kobo dị ukwuu karịa ọbá akwụkwọ Sony, ya bụ, anyị nwere «natara na mberede»Otutu akwukwo na akwukwo ihe omuma na mgbakwunye inwe nhọrọ nke inweta ya maka onu ahia ala na ego Kobo weputara. N'agbanyeghị nke ahụ, buru n'uche na e meela vidiyo ahụ tupu akụkọ banyere akwụkwọ ntanetị, yabụ ị gaghị ahụ ya na vidiyo n'oge ọ bụla.
Sony PRS-T3, ezigbo ngwaahịa Sony
El PRS-T3 biakutere anyi gabiga ụmụ okorobịa si sony. Ihe kacha dọta uche m bụ ihe nkwakọ ngwaahịa eReader. Mgbe anyị wepụsịrị plastik, linings na igbe kaadiboodu, anyị hụrụ ngwugwu eReader, ngwugwu anyị nwere ike ịhụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa, ya bụ, nchekwa nke eReader dị ịtụnanya, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ndị asọmpi ya dịka Si na Amazon. Ozugbo emepere anyi, anyi na achoputa eReader, akwukwo na eriri USB nke anyi nwere ike iji chaji batrị eReader tinyekwara igwa eReader na komputa.
Banyere njirimara teknụzụ, ị ga-ahụ ha na vidiyo yana isiokwu ndị ọzọ edepụtarala, agbanyeghị m ga-achọ igosipụta akụkụ abụọ m chere bụ isi maka eReader a. Nke mbụ n’ime ha bụ ọnọdụ batrị. Na Sony PRS-T3 Echere m na ọ bụ eReader mbụ nke na-etinye batrị n'ime onye ọrụ ahụ, yabụ ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu na ya ma ọ bụ chọọ dochie ya, anyị nwere ike ịme ya na-enweghị ọrụ ọrụ ọ bụla. Àgwà ọzọ nke Sony PRS-T3 pụta ìhè bụ ya na ihuenyo. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na PRS-T3 O nweghi uzo ocha dika ndi ya na ndi ozo, o nwere onodu ohuru ma doo anya, ya na ocha di ole na ole ndi mmadu nwere ya na ihe omuma di egwu. Echiche a bara oke uru mgbe anyị chọrọ ịde ihe, detuo ya n’okpuru ma ọ bụ sepụta ya na ntaneti anyị site na iji aka anyị aka.
Banyere software nke Sony PRS-T3, interface ya dị mfe ma kensinammuo, dịka nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile eReaders, agbanyeghị na anyị achọpụtala ọdịiche dị mkpa, PRS-T3 Ọ na - ewe ogologo oge iji gbanye, gbanye, ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ eReaders dị ka Kobo Aura HD, mmalite ya abịaghị n'oge, agbanyeghị, ozugbo agbanyere ya, ọsọ na ibudata ebook dị oke ọsọ. Ekwe omume karịa ndị ọzọ eReaders dị ka Kobo Aura HD ma ọ bụ Akwụkwọ Akwụkwọ. Ihe ozo kwesiri ekwenye bu na Sony PRS-T3 nyere iji wụnye ma jiri ngwa na eReader. Na mgbakwunye na ngwa ndị bụ isi, Sony na-etinye ngwa abụọ bara ezigbo uru na eReader ya: Evernote na Facebook. Nke mbụ, Evernote, na-eme ka eReader anyị bụrụ ihe dị ebube nke anyị nwere ike idetu ndetu anyị niile, nhọpụta na ọrụ kwa ụbọchị, anyị na-ede ya na pc ma mekọrịta ya na eReader. Ma anyị nwekwara ike ịwụnye ngwa ndị ọzọ dịka akpa ma ọ bụ telegramKa anyị ghara ichefu na ndabere sistemụ bụ gam akporo.
Banyere nzụta nke ebook, anyị enweghị ike ịchọpụta ya na mbụ ebe ọ bụ na eReader gwara anyị na e nwere nsogbu na ebookstore na mpaghara ahụ, ikekwe usoro mgbanwe amalitelarị na ị ga-enwerịrị ugbu a.
N'ikpeazụ, kwuo na Sony PRS-T3 bịara na nchekwa nchekwa bara ezigbo uru nke ga - enyere anyị aka ịchekwa eReader anyị site na nsogbu dị egwu, ugbu a, ọ bụrụ na anyị achọghị ya, enwere nhọrọ ịzụta eReader na - enweghị ikpe ahụ, yana ihe na-akpata mbelata na ọnụahịa ya. I kpebiri. Kedu ihe ị chere maka nyocha a? Enwere akụkụ ọ bụla ị ga-arụtụ aka na-ekwughi ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Nyochaa nke Sony eReader ọhụrụ: Sony PRS-T3
Pedro Dadah dijo
Tupu Kobo Aura HD eReader m bụ Sony PRS-600 na ihe abụọ gbara ọkpụrụkpụ bụ ihe mere m ji gbanwee akara a: 1st: Enweghị m asụsụ Spanish, yabụ enweghị m nhọrọ nke akwụkwọ ọkọwa okwu na nke abụọ. ihe ngosi ọkụ.
Ihe sitere na Sony dị elu karịa nke Kobo, siri ike, a na-egosipụtakwa ọbá akwụkwọ ka ọ dị mfe, dị mfe ma nwee nhọrọ ọchụchọ ka ukwuu, dị ka ụdị edemede.
Zaghachi Pedro Dahdah
N’ụbọchị GHOVNANYA SI N’IME NWAANY A M SONY PRS-T3 EREADER. Ọnwa ole na ole bụ ọkara nke ihuenyo BLRRED na warara. Ha KW THATR ME M NA NKPRER IS NA-EMEBI EGO NA EBUGH IS AKW CKWỌ AH THE. Ndozi ahụ bụ mmegide-akụnụba. Ọ D D aghụghọ Aghọtaghị m.
Zaghachi na VICENTE
Ihuenyo ahụ na-emebi ngwa ngwa site n'iji ya eme ihe n'ime ọnwa ole na ole iji ya na Sony agaghị enwe ọrụ maka nrụzi ọbụlagodi na akụrụngwa dị n'okpuru akwụkwọ ikike.
Enyere m nwunye m Sony PRS-T3. Obi di ya uto nke ukwuu, enyekwara m ya ihe mkpuchi ya site n’ọkụ. Mana mgbe ọnwa atọ gachara, otu ụbọchị, ọ hụrụ ya na ọnyá dị n'elu ihuenyo ahụ. M na-ewepu mkpuchi nchedo iji were ya na SAT na n'ime ọrụ ahụ ọnya ahụ gbatịpụrụ n'etiti ya. Achọpụtara m na ọ ga-agbaji.
Mana dị ka ha na-ekwu n'ọtụtụ okwu, SONY na-agafe ihe niile ma na-ewereghị ya ka ọ bụ ọrụ ya, ọ bụghịkwa akwụkwọ ikike ya. Ọ B A EZIOKWU EGO n'ihi na ngwaọrụ ahụ adịghị ọnụ ala ma ọlị, ma nwee ihu igwe na-esighi ike nke na-anaghị agbaso ụkpụrụ nkwụsi ike kacha nta.
Ọ mere m otu ihe ahụ. Mgbe ọnwa atọ nke iji a gbajiri ihuenyo na-enweghị ihe ọ bụla. Sony enweghị ọrụ. Mwakpo agha. Azụla eBook a ma ọ bụ na ego gị ga-efu gị.
Ahapụrụ m ya ejighị ya maka ọnwa ọkọchị, na-atụ m n’anya, mgbe m chọrọ igbanye ya ọzọ ọ gaghị agbanye. Ejiri m ya ọtụtụ ugboro na ihe ọ bụla, ọ naghị arụ ọrụ. N'ezie na obere oge iji, ọ gbajiri m.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ mkpọ ma ọ bụ ihe ọ bụ n’ezie. Enwere ike ịnweta batrị ahụ, mana eriri ndị jikọtara ya na-ere ... € 150 maka ihe mkpofu ...
Mozilla Firefox, ihe nchọgharị zuru oke maka ndị na-agụ akwụkwọ